Warbixintii AyThe Monitoring Group on Somalia, u Gudbisay Qaramada Midoobay Fadeexad Loo Baahnaa Cambaarna Ku Noqotay Shaqsiyaad Bulshada Dhexdeeda iskula Weynaa Xaaraantana Hoosta Ka Dhuuqi jiray (Warbixinta oo English Ah Hoosta Ka Aqriso) | buqaqable.net
Warbixintii AyThe Monitoring Group on Somalia, u Gudbisay Qaramada Midoobay Fadeexad Loo Baahnaa Cambaarna Ku Noqotay Shaqsiyaad Bulshada Dhexdeeda iskula Weynaa Xaaraantana Hoosta Ka Dhuuqi jiray (Warbixinta oo English Ah Hoosta Ka Aqriso)
Warbixita, oo ka kooban 110 bog, ayaa ugu horreyn-ba sheegeysa in inkastoo ay saaxadda siyaasadeed ee Somalia
Si weyn isku bedeshay sanadkii tagay, oo la doortay hoggaan cusub,wadaaddo qunyar socod ahna ay majarihii
dalka qabteen, in haddana xaaladda guud ee dalka, inay kasii darto m ahane, aaney wax weyn iska beddelin.
Warbixintu waxay sheegtay in colaadda ka aloosan koonfurta Somalia ay u xuubsiibatay mid qabyaalad ku saleysan.
Waxaana illaa hadda meesha ka maqan koox ama dhinac cudud xooggan muujiyey, oo muquunin kara kuwa kasoo horjeeda.
Guddiga Daba-galka xayiraadda hubka, oo ah laanta soo saarta warbixinnada noocan ah sanadkiiba mar, ayaa xoogga saartay saddex qeybood.Qeybta koobaad, waxay warbixintu xoogga saarta hubka sida sharci darrada ah ugu soo qulqulaya dalka Somalia,
taas oo xadgudub ku ah xayiraaddii xagga hubka ee ay Qaramada Midoobay saartay Somalia, sanadkii 1992-dii. Qeybta labaad ayay warbixintu xoogga ku saartay musuqmaasuqa iyo laaluushka aafeeyey hey’adaha dowladda KMG ah, iyo kuwa waliba qandaraaslayaasha daabula cuntada samafalka ah ee Somalia loo wado.
Haddii aan ku horreyno hubka sharci darrada ah ee Somalia ku qulqulaya, warbixinta ayaa sheegtay in hubka ugu badan uu wali Somalia kasoo galo dhanka dalka Yemen, balse waxay kaloo sheegtay in Ethiopia uu yahay dalka ugu weyn ee hub iyo rasaas siiya kooxo kala duwan oo Somalia jooga.
Eritrea ayaa iyana soo raacda, iyadoo la sheegay in, inkastoo uu sanadkii lasoo dhaafay yaraaday hubkii ay Somalia geyn jirtay, haddana inay xoojisay taageerada dhaqaale, iyo midda siyaasadeed ee ay siiso kooxaha ku kacsan dowladda Somalia.
Tusaale ahaan, Eritrea way qirsan tahay inaysan aqoonsaneyn DKMG ah ee caalamka intiisa kale uu inta badan aqoonsan yahay.Dowladda KMG ah iyo ururka Ahlu-Sunna Wal-Jamaaca ayaa hubka ugu badan ka hela dowladaha dariska ah,
Sida warbixintu sheegtay. Laakiin kooxaha dowladda kasoo horjeeda, sida Xizbul-Islaam iyo Al-Shabaab, ayaa hubka intiisa badan ka iibsada suuq madow, suuqaas oo uu garwadeen ka yahay nin la yiraahdo Max’ed Siciid “Atom,” oo sida ay warbixintu sheegeyso ah
Dillaalka ugu weyn ee hubka ka keena Yemen, isagoo marka hore kasoo dajiya xeebaha Puntland, gaar ahaan Bariga Sanaag, halkaas oo uu saldhig iyo malleeshiyo-ba ku heysto. Warbixinta ayaa sheegtay in Atom uu malleeshiyadiisa u bixiyey “Mujaahidiinta Bariga Sanaag,” isagoo xiriir toos ahna la leh kooxda al-Shabaab,
kuwaas oo tababar malleeshiyadiisa ku siiyey xero ku taalla deegaanka Galgala. Warbixinta ayaa sheegtay in Atom uu hadda billaabay inuu Galgala ka dhiso gegi dayuuradeed, iyo inuu isku diyaarinayo dagaal uu la galo maamullada Somaliland iyo Puntland.
Sidoo kale, warbixintu sheegtay in Xizbul-Islam iyo Al-Shabaab-ba ay hub iyo saanad wali ka helaan Eritrea, iyadoo kasoo dajisa xeebaha ku teedsan min Kismaayo illaa Muqdisho. Intaas waxaa dheer dagaal-yahanno ajnabi ah, oo wali kusoo qulqulaya.
Guddiga Dabagalka Xayiraadda Hubka Qaramada Midoobay, ayaa tirada guud ee dagaal-yahannada ajnabiga ah wuxuu ku qiysaasay inay ka yar tahay kun dagaal-yahan, oo qaar kamid ah ay yihiin khubaro xagga tababarka iyo walxaha qarxa.
Qeybta labaad ee warbixinta, oo xoogga saartay musuqmaasuqa hareeryey DKMG ah iyo qandaraaslayaal daabula raashinka gargaarka ah, ayaa sheegeysa in wasiirro iyo xildhibaanno ka tirsan dowladda Somalia ay iibiyaan Visooyin ama dal-ku-gal Reer Galbeed ah.
Warbixinta ayaa magacowday saddex wasiir, oo kala ah: wasiirka kalluumisiga iyo kheyraadka badda, ahna ra’iisul wasaare ku xigeen, Prof. C/raxman Ibbi, wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka, Madoobe Nunow, iyo wasiirka qoyska iyo haweenka, Fowsiyo Max’ed Sheekh.
Prof. C/raxman Ibbi, oo ay VOA-du weydiisay eedeymaha ku saabsan Visooyinka la iibsaday mar uu ka qeyb galayay Barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha maalintii Axadda, ayaa beeniyey eedeymahaas.Ka sokow wasiirrada, waxay warbixintu magacowday
mudane ka tirsan baarlamaanka, oo la yiraahdo C/caziiz C/llahi Max’ed (Cabdi-Xukun), oo sida ay warbixintu sheegtay ah dillaal weyn oo soo dhameeya Visooyinka. Warbixinta ayaa sheegtay inuu Cabdi Xukun ka faa’ideyso baasaboor Midwoga Africa ah,
oo uu heysto, kuna helay xilli uu ka tirsanaa baarlamaanka Midowga Africa.Sidoo kale, warbixinta waxaa lagu magacaabay danjiraha Somalia u fadhiya Nairobi, Max’ed Cali America. Danjire America, oo la hadlay Guddiga Daba-galka ee warbixinta soo saaray, ayaa beeniyey inuu ku lug leeyahay iibinta Visooyinka.
Si kastaba ha ahaatee, khubarada u kuur gala Somalia, ayaa qaba in ugu yaraan faa’iidada laga heli karo warbixitan, ay tahay in shakhsiyaadka la eedeeyey, iyo kuwa damca inay musuqmaasuq geystaan-ba, inay ku khasbanaan doonaan inay ka fiirsadaan tallaabadooda,
kahor intii aaney qaadin.ra’ayigaas waxaa qaba Dr. Afyare Cabdi Cilmi, oo daraasaadka caalamiga ah ka dhiga Jaamacadda Qatar ee Doxa. Sidoo kale, Prof. Afyare wuxuu qabaa in dowladda KMG ah soo dhaweyso baaritaankan.
Sidaas darteed, warbixinta ayaa sheegtay in burcad-badeednimadu ay tahay ganacsi qoys. Dhanka Xaradheere, qoyska udub-dhexaadka u ah burcadda waxaa hoggaamiya Max’ed Xasan Cabdi “Afweyne,” waxayna warbixintu sheegtay inuu wiilkiisa C/qadir uu sanadkii tagay la wareegay inta badan howlaha burcadda bartamaha Somalia
Warbixinta ayaa sheegtay in madaxda sare ee Puntland, sida madaxweyne C/raxman Max’ud “Faroole,” Wasiirka arrimaha gudaha, Gen. C/llahi Axmed Jamac “Ilka-Jiir,” iyo wasiirka amniga, Gen. C/llahi Saciid Samatar, in masuuliyintani ay xiriir toos ah la leeyihiin
burcad-badeedda, iyo waliba inay ka macaashaan dhaqaalaha ay burcaddu soo xareyso, sida ay warbixintu qortay.Inkastoo ay Puntland kordhisay la dagaallanka burcadda iyo cambaareyntoodaba, sanadkii lasoo dhaafay, sida ay warbixintu qortay,
haddana warbixintu waxay sheegtay in horjoogayaal burcad-badeed ay si xor ah u joogaan Puntland, mararka qaarkoodna ay badbaado heleen.Warbixintu waxay tusaale usoo qaadatay in Gen. Ilkajiir, wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland, inuu si shakhsi ah ugu ololeeyey sii deynta toddobo burcad-badeed ah oo daacad u ah Xannaano, ,
kuwaas oo ay la baxsadeen shaqaale u dhashay Masar, oo lagu heystay deegaannada Puntland. Warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay inuu General Ilka-Jiir, oo muddo dheer ku noolaa dalkan Mareykanka, inuu u ololeeyey in Xannaano loo magacaabo taliyaha ciidanka ilaalada badda ee deegaannada Sanaag,
kaddib markii uu, sida warbixintu sheegtay, Fu’aad Xannaano siiyey Ilka-Jiir lacag dhan $200,000, xilligii uu jeneraalku u tartamayay madaxtinimada Puntland.Si kastaba ha ahaatee, wasiirka warfaafinta ee Puntland, C/xakiim Axmed Guled, oo Jimcihii shir jaraa’id ku qabtay xarunta madaxtooyada Puntland ee Garoowe, ayaa si kulul u beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey Puntland.
‘Ha lala xisaabtamo’
Warbixinta oo english Ah
Waxaa Soo Tarjumay Somali VOA
« Heshiiskii ahlusunna iyo Dowlada oo Wax Laga Badalay Ayaa Addis-ababa Lagu Saxiixay iyo Ururka Ahlu-Sunna oo Arinkaas ku Kal Jabay Amin Arts iyo Xaalka Ay Maanta Soomaaliya Mareyso Sawira kaloo Xiiso Badana Hoosta Ka Daawo »